Filtrer les éléments par date : jeudi, 24 décembre 2020
jeudi, 24 décembre 2020 23:01
Joyeuse fête de réveillon de Noël à tous
Pilo kely : Joyeuse fête de réveillon de Noël à tous
jeudi, 24 décembre 2020 19:22
Primatiora : Nankalaza ny Krismasy 2020 anaty fahamailoana manoloana ny Covid-19
Nankalaza ny Krismasy 2020 teny Mahazoarivo niaraka tamin’ny Lehiben’ny governemanta, Ntsay Chrisitan, ny fianakaviamben’ny Primatiora. Nirary soa ho an’ny mpiasa rehetra eo ambany fiadidiany, sy ny fianakavian’izy ireo avy ny Praiminisitra.
Notsiahiviny fa nandalo fotoan-tsarotra sy niaina fangirifiriana ny firenena tao anatin’ny sivy volana, niatrika ny ady tamin’ny valanaretina Covid-19 : “Tsy mora raha tarafina ny zavatra niainantsika tao anaty fihibohana”, nefa toy ny any amin’ny firenena rehetra eran-tany dia mbola mitohy hatrany izany ady izany, ka tohizana ny fampiharana ireo fepetra ara-pahasalamana teo aloha, mba hahafahana mifehy ny mety ho fivoaran’izany valanaretina izany any amin’ny fiarahamonina sy ny toerana hafa.
Mgr Odon Razanakolona, Arsevekan'Antananarivo sady filohan'ny FFKM
Ho antsika mpianakavin’ny finoana rehetra,
Tonga indray ity ny andron’ny Noely, hankalazantsika ny nahaterahan’i Kristy. Fety miavaka izany ho an’ny mpino Kristianina rehetra maneran-tany, ary tsy ho diso anjara amin’izany isika Malagasy. Firavoravoana, fifaliana, fifankatiavana, fa indrindra firaisan-kina no tena hanamarihana izany fankalazana izany ao anatin’ny fivavahana.
Izao fetin'ny Noely izao ihany koa dia manamarika ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Natolony ho antsika ny Zanany Lahy tokana mba ho famonjena antsika. Hanaisotra ireo ota maroben’ny zanak’olombelona. Izany no taratry ny famindrampon’Andriamanitra amintsika, ka ho Azy ny dera sy ny laza amin’ny fotoana rehetra, indrindra ny toy izao.
Ny Noely dia manambara amintsika fa ny fampianarana ny fampiraisana dia avy amin'i Kristy. Ny fiombonantsika Kristianina mpiara-mivavaka dia tena avy amin’i Kristy.
Nitafa tamin’ny vahoaka Malagasy tamin’ny alalan’ny horanantsary fohy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina, avy any Frantsa, nirary soa sy nampahery ny Malagasy mba tsy ho kivy amin’izao ankatoky ny krismasy sy ny fitsenana ny taona vaovao izao.
Sivy volana aty aorian’ny nitafany farany ny Marsa 2020 no nilazany fa fotoana handinihan-tena izao. Mila toe-tsain’ny fisandratana, fiovana ary fanovana. Koa raiso ny andraikitra manandrify anao, hoy izy !
Ny 6 novambra 2020 no efa nambara fa hisokatra ho azon’ny besinimaro tsidihina mialohan’ny Noely ny Mozea ao Anatirova. Nahemotra izany.
Raha ny fanazavan’ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Andriatongarivo dia noho ny fahazoana sy ny fahatongavan’ireo harem-bakoka nampodiana avy any Londres taorian’ny lavanty nahazoan’ny fitondram-panjakana azy ireo, sy noho ny lamina amin’ny fampirantiana azy ireo sy ny fampanamboarana ny toerana ahafahana mampiranty azy izay mila manaraka ny fenitra iraisam-pirenena amin’ny mozea no antony nanemorana herinandro vitsivitsy izany fisokafana izany.
jeudi, 24 décembre 2020 18:41
Sosialin'ny tahirim-bolam-panjakana : Tsy manan-kialofana 70 nisitraka izany
Olona sahirana sy tsy manan-kialofana nanodidina ny 70 teo ho eo no nisitraka ny fanampiana avy amin'ireo mpiasan'ny Tahirim-bolam-panjakana Antsirabe, ny harivan'ny Alarobia 23 Desambra 2020.
Hetsika efa fanao isan-taona ity notontosaina ity, ary in-droa isan-taona no hanaovan'izy ireo izany raha ny fanazavana nomen-dRtoa Randriamiharisoa Volatahiana, tompon'andraikitra voalohanany ao Antsirabe, hatramin'ny taona 2013.
jeudi, 24 décembre 2020 15:30
Fifidianana Loholona : Nanao pao-droa ny IRMAR tamin’ny faritany efatra
Toerana Loholona miisa folo amin’ireo roa ambin’ny folo nofidian’ireo mpifidy vaventy, no azon’ny IRMAR (Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina), nahazo toerana roa kosa ny MMM (Malagasy Miara Miainga).
Nivoitra ireo nandritra ny tatitra ny vokatra vonjimaika tamin’ny fifidianana Loholon’i Madagasikara ny 11 desambra 2020, nataon’ny CENI ny alarobia 23 desambra 2020.
Nanao pao-droa ny IRMAR tamin’ny faritany efatra, ankoatra an’i Toamasina sy Antananarivo, izay nahazoan’ny MMM toerana iray avy.
Tamin’ireo mpifidy vaventy miisa 12 465 voasoratra ao anaty lisi-pifidianana, 11 642 no nandray anjara tamin’ny fifidianana.
Tao amin’ny Distrikan’i Miandrivazo sy i Morombe no voalaza fa nisy fandikan-dalàna tamin’ny fifidianana, ka nisarihan’ny CENI ny sain’ny Fitsarana mahefa.
Nivoaka ny didim-pitsarana 4 taona an-tranomaizina, sazy mihatra ho an'olona 4 tompon'andraikitra ambony teo anivon'ny Jirama, ka isan'izany ny Tale Jeneraly teo aloha Désiré Rasidy, sy ny Tale jeneraly misahana ny raharaha anatiny DGA Ravelojaona Albert Marie.
Tsy nijanona indray andro tany am-ponja anefa ity farany, dia navoaka ny fonja, araka ny baiko nomen'ny Mpampanoa Lalàna eo anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly, na ny Procureur Général près le Pôle Anti-coruption Antananarivo, mandidy ny lehiben'ny Fonjan'Antanimora hamoaka azy, noho ny tsy fisian'ny taratasy famonjana an'i Ravelojaona Albert Marie.